पोखरादेखि कलकत्ता जान खोज्नेहरू सप्तरीबाट फिर्ता – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारपोखरादेखि कलकत्ता जान खोज्नेहरू सप्तरीबाट फिर्ता
पोखरादेखि कलकत्ता जान खोज्नेहरू सप्तरीबाट फिर्ता
१६ बैशाख २०७७, मंगलवार ०७:३७ प्रकाशित
कलकत्ता निवासी हुन्, सलिम एसके र शहिद दुल्ला।उनीहरू तीन महिनाअघि नेपाल आएका थिए। उनीहरू पोखरा र आसपासका गाउँहरूमा प्लाष्टिका भाँडा बेच्छन्। यसरी कमाएको पैसाले आफू पालिन्छन् र परिवारका लागि भारत पठाउँछन्।कोरोनाभाइरसको त्रास बोकेर उनीहरू एक महिना पोखरास्थित कोठामै बसे। लकडाउनले बाहिर निस्कन पाएनन्। बसेर खाँदा जम्मा गरेको पैसा पनि सकियो। दिनहुँ कलकत्तास्थित परिवारसँग सम्पर्क हुन्थ्यो। परिवारले घर आउन भनिरहन्थे।
‘सस्तो प्लाष्टिकको भाँडा बेच्छौं,’ शहिदले सेतोपाटीलाई भने,‘यसपटक आएर पैसा कमाउन भ्याइएन, काम नगरी खानुपर्दा अलिकति जम्मा गरेको पनि सकियो।’यता खर्च सकियो, उता परिवारको चिन्ता। लकडाउनमा बसेको एक महिनापछि उनीहरूले घर जाने विचार गरे।
शहिद र सलिम मात्र होइन, कलकत्ताबाटै आएका उनीहरू १७ जना थिए। उनीहरू पोखराको सिर्जना चोक र सिमलचौरमा दुई ठाउँमा दुइटा कोठामा बस्छन्। ठूलो कोठामा समूहमा मिलेर बस्दा खर्च कम लाग्ने, सबै जना सँगै बस्न पाइने।‘हामीले धेरैजसो गाउँ डुल्छौं,’ सलिमले भने,‘कोठामा धेरै समय बसिरहन पाउँदैन।’
जबजब खाना र पैसा दुबै सकिँदै गयो, चिन्ता पनि उही गतिमा बढ्यो। यसबीचमा पोखरा महानगरले बाँडेको राहत उनीहरूले पनि पाए।राहत पाएर के गर्नु, हप्ता दिनलाई पनि पुगेन। उनीहरूले राहत स्वरूप २५ किलोको एक बोरा चामल, २ किलो दाल, १ पोका तेल, १ पोका नुन र १ किलो चना पाएका थिए। उनीहरू ठूलो संख्यामा बस्ने भएकाले यो राहत १ हप्तामै सकियो। राहतको खाना पनि सकिएपछि उनीहरूर्ला घर जाने मन बढ्दै गयो।
उनीहरूले घर जाने पास भए गाडी लिएर जान सकिने कुरा थाहा पाए। नेपालभित्रैकै अन्य जिल्लाका मजदुर घर गएको देखे। आफूहरू पनि जान पाउँछौं कि भनेर सल्लाह गर्न थाले। उनीहरूले सल्लाह गर्दा आफूहरू मात्र होइन, कलकत्ताबाटै आएका तनहुँको दमौलीमा रहेका १० जना र पोखरामै अर्को समूहमा रहेका ३५ जनासँग पनि सल्लाह भए। सल्लाह गर्दा सबैलाई घर जान मन लागेको बताए।
घर जान उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई भेटे। जिल्ला प्रशासन जाने बाटो अलि टाढा थियो। वडाकै सिफारिस भए गाडी जान सक्ने उनीहरूले थाहा पाइसकेका थिए। उनीहरूले दुई वटा गाडीका लागि वडाबाट पास बनाए। वैशाख १० गते सबैजना जुटेर घरतर्फ लागे। दमौलीमा रहेका १० जनालाई पनि बस चढाए।
बाटोमा ठाउँठाउँमा प्रहरीको चेकजाँच थियो। वडाको पास देखाउँदै दुइटा गाडी अगाडि बढे। जब उनीहरू सप्तरीको भारदह पुगे, त्यसपछि अगाडि बढ्न पाएन। प्रहरीले जहाँबाट आएका त्यहीं जानु भनेर फर्काइदियो। सलिमका अनुसार, भारदहमा पुग्दा रातको ११ बजेको थियो। पोखरा महानगरको वडाले बनाएको पास यहाँ भने काम लागेन।दुईवटै बस त्यही रात जुन बाटो गएको थियो, त्यही बाटो फर्कियो। घर जान पाएको खुशी एक दिन पनि टिकेन। फेरि पोखरा नै फर्केर बस्नुपर्ने भयो।
नेपाल र भारत दुबै सरकारले जो जहाँ छन्, त्यहीं राख्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक नेपालमै र भारतमा रहेका नेपालीलाई भारतमै राख्ने दुई सरकारको सहमति छ। यही कारण भारतमा रहेका नेपाली र नेपालमा भएका भारतीय नागरिक सिमानामा पुगेर पनि आ–आफ्नो देश छिर्न पाएका छैनन्।यो निर्णय पोखरामा रहेका भारतीय नागरिकलाई थाहा रहेनछ। ‘बोर्डरबाट छिर्नै पाउँदैनौं भनेर हामीलाई थाहा नै भएन,’ शहिदले भने, ‘दु:खमात्र पायौं।’
उनीहरूको यो यात्रामा बिचबाट जोडिएका थिए, पोखराका चित्रबहादुर कुँवर।पोखराका व्यवसायी कुँवर मामाघर गएका छोरा लिन चितवन गएका थिए। साथीको गाडीमा चितवन पुगेका कुँवर टाँडीस्थित ससुरालीसम्म यही गाडी चढेर गएका थिए। छोरा ७ बर्षिय अनुप कुँवर लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र मामाघर टाँडी गएका थिए। अनुपलाई लकडाउनमा मामाघर बस्न मन लागेन। दिनहुँ बाबु–आमालाई फोन गरेर लिन आउन अत्याए।
भारतीय नागरिकलाई लिएर गएको बस फर्किदा सँगै फर्कने उनले भनेका थिए। जब बस भालिपल्ट बिहानै फर्कने भन्यो, उनी विहान ५ बजेदेखि नै तयार भए। विहान ६ बजे नै टाँडीबाट बस चढेर फर्किए।‘छोरा आत्तियो, लिन भनेर गएको,’ कुँवरले भने, ‘अहिले बाउछोरा नै क्वारेनटाइनमा बस्न परेको छ।’
सप्तरीबाट फर्केका दुबै गाडीमा सवार सबैलाई अहिले क्वारेनटाइनमा राखिएको छ। कुँवरका बुबा–छोरा होम क्वारेनटाइनमा छन्। उनीहरूको पोखरामा इलेक्ट्रिक पसल छ। पसलकै गोदाममा बास बसेका छन्। खाना घरबाट ल्याइदिने गरेका छन्।
बाँकी सबै ५४ जना भारतीय नागरिकलाई क्वारेनटाइनमा राखिएको छ। दुई वटा समूह बनाएर उनीहरूलाई राखिएको पोखरा महानगर वडा नं. ८ का अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले बताए। एउटा समूह उनीहरूकै कम्पाउण्डवाला भवनमा रहेको डेरामा राखिएको छ भने अर्को समूहलाई पोखराकै जनप्रिय माविको भवनमा राखिएको छ।
दुईवटै सवारी साधनका चालक र सहचालकलाई पनि होम क्वारेनटाइनमा राखेको वडाध्यक्ष बरालले बताए।क्वारेनटाइनमा उनीहरूलाई २४ घण्टा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको छ।‘खाना सकियो भने प्रहरीलाई भन्नुपर्छ,’ शहिदले भने, ‘त्यसपछि मात्र बाहिर गएर ल्याउन पाइन्छ।’क्वारेनटाइनमा बसेको ३ दिनपछि आइतबार उनीहरू सबैको आरडीटी टेष्ट गरेको छ। पोखरा महानगरको वडा नं. ८ स्थित स्वास्थ्य इकाइमा उनीहरू गएकै बसमा ल्याएर परिक्षण गरेको हो।
दुईवटा बसमा गरेर ५२ जना भारतीय नागरिक, दुईवटा बसका चालक र सहचालक गरी ४ जना र कुँवरका बुवा–छोरा २ जना र पोखराकै थप २ जना गरी ६० जनाको आरडिटी टेष्ट गरेको वडाध्यक्ष बरालले बताए। पोखरा महानगरका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निर्देशक फुलदेव तिमिल्सिना, स्वास्थ्य इकाइका एचए दीपेन्द्र सुनारले उनीहरूको आरडिटी टेष्ट गरेका थिए।
‘आरडिटी टेष्टमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो,’ वडाध्यक्ष बरालले सेतोपाटीलाई भने, ‘शनिबार बेलुकाको खाना खुवाएर आ-आफ्नै कोठामा पठायौं।’ कोठामा बस्न गएका उनीहरू सबैलाई थप राहतको व्यवस्था मिलाएको बरालले बताए।